ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: ကြံ့ဖွံ့အစိုးရစစ်တပ်က လေကြောင်းနဲ့ပါ ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ ကချင်ပြည်တွင်းစစ် (ဇန်န၀ါရီ၊ ၂၀၁၃ - ဧရာဝတီရုပ်သံ)
ကြံ့ဖွံ့အစိုးရစစ်တပ်က လေကြောင်းနဲ့ပါ ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ ကချင်ပြည်တွင်းစစ် (ဇန်န၀ါရီ၊ ၂၀၁၃ - ဧရာဝတီရုပ်သံ)
Posted by ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ at 8:05 AM
saw kt oo said...
Army F...er said...
saw kt 00 ဆိုတဲ့ နွား မင်းလဲဘာထူးလဲ သနားစရာ ကောင်ပါပဲကွာ အဲဒါ လောင်ချာမဟုတ်ဘူးကွ လဒရ 120mm မော်တာလို့ခေါ်တယ် မှတ်ထား။ စောက်ရူး သိကမသိဘူး သူများကိုကျတော့လောင်ဖို့ပဲသိတယ်။
jully soe said...
ခွေး စစ်အစိုးရကို အကုန်သတ်ပစ်ကွာ
ဒီလို၁၂၀ မျိုးကေအိုင်အေမှာ၁၀ခုပြည့်အောင် မရှိ့ပါ၊၇၇၁မှာအ
ကေအိုင်အေရဲ့ရှားပါးပစ္စည်း120 ကို လောင် ချာလို့ခေါ်လို့
မရဘူးလားဟင်၊ ကေအိုင်အေ တွေ၁၂၀ ကိုမသုံးဘူး
All KIA will die in near future
မျီုး ချစ် said...
အခု ကယ်ကြပါ...ကယ်ကြပါ အော်နေတာ ဘယ်ကောင်တွေလဲ
lahtoi ja said...
be care how many burmese sodier died in war.
la bang said...
သူခိုး ဓားပြ အကြီးစားတွေ စုနေတဲ့ နေပြည်တော်ကို Nuclear တလုံးလောက် ကျွေးလိုက်ရင်ဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံကြီးစည်ပင်ဝပျောလို့ အေးချမ်းသာယာသွားမယ် အခုဖြစ်နေတဲ့ နိုင်ငံရေး ပြသနာတွေ အားလုံး အားလုံး ရှင်းသွားမှာပါ။ စစ်ဆိုရင် ဘာစစ်ပဲဖြစ်ဖြစ် ရေစစ်တောင်အလွတ်မပေးပဲ အားလုံးကို ပြည်သူ့ အင်အားနဲ့ ငရဲကိုပို့ပြစ်လိုက်ရင်ဖြင့် အမိမြန်မာနိုင်ငံကြီး ကျက်သရေ အပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံလို့ သွားမှာလဲ အမှန်ပါပဲဗျာ....
အ ဝေးက နေ ပြေားနေ ကြ ဝေဖန် ရေးတွေလုပ်နေကြနဲ့စစ် မြေပြင် မှာနှစ်ြ ကား ညပ်နေတဲ့ဒို့တ တွေမှာဘယ်သူကိုအ ဖေ ခေါ်ရမှန်း တောင်မသိ တော့ပါဘူးကွာ အခုလဲလမ်းတွေပိတ် ထာတော့ကုန်ဈေး တွေကတက် ကုန်ပြီ ဒို့ပြည်သူတွေဘဲခံစား ရတာမဟုတ်လား စစ်မြေပြင်ကြား မှနေရတဲ့ဒိုဘဝတွေ တစေ့တ စောင်းအားလုံးသိအောင် လို့ပါ
Tun Aye Kyaw said...
KIA တရုတ် အားကိုးနေတာကို ဖျောက်သင့်ပါပြီ
ငြိမ်းချမ်းရေးကို မျက်ကွယ်ပြုတာ မကောင်းပါဘူး
အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး ကိုဦးစွာ လုပ်သင့်ပါတယ်
ဒုက္ခသည်များ ကိုယ်ချင်းစာပါ စစ်ဝါဒီများ ကျရှုံးပါစေ
KIA ရဲ့ တံတားဖျက် ရထားမိုင်းခွဲ ရှမ်းရွာတွေကို အနိုင်ကျင့် အမျိုးသမီးတွေကို ဖျက်ဆီး လူတွေကို
KIA ထဲ အတင်းဝင်ခိုင်း ပူတာအိုက လီဆူးတွေ ထမင်းငတ် သေအောင်လုပ် စတဲ့ အမျိုးစုံ လှတဲ့ အကြမ်းဖက်
မူတွေကို လုပ်နေတာ Terrorist Group အဖြစ် အစိုးရက
နိုင်ငံတကာက သိအောင် မှတ်တမ်းမှတ်ရာနဲ့ ဖေါ်ထုတ်သင့်ပြီ
တကယ်တော့ KIAကို အဓိကကြိုးကိုင်နေတာက KIA ခရိုနီတွေရယ် အစွန်းရောက်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေရယ် ကျဉ်းမြောင်းတဲ့ လူမျိုးရေးအစွဲကြီးသူတွေရယ် ဖြစ်ပါတယ်။ မယုံရင် စာရင်းကောက်ကြည့်လိုက်ပါ အဲဒီလူတွေနဲ့ ဆွေမျိုးတွေ ဟာ တခြားလူမျိုးတွေ လက်လှမ်းမမှီနိုင်တဲ့ အခွင့်ထူးတွေကို မြန်မာပြည်ထဲက ရန်ကုန် မနတလေး မြစ်ကြီးနား လိုင်ဇာ တို့မှာ ရရှိခံစားနေကြ တာပါ တကယ့်နယ်မြေခံ ကချင်နဲ့ တခြားလူမျိုးစုငယ်လေးတွေက ဘာစာမှလည်းမတတ် ကယ်မယ့်သူလည်းမရှိ KIA ပြောသမျှနာခံယုံက လွဲလို့ဘာမှမတတ်နိုင်ကြပါဘူး နိုင်ငံတကာ NGO ကလည်း KIA/ KIO နဲ့ ခရိုနီတွေံ ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကို လူသားချင်းစာမှုကို အကြောင်ဲးပြပြီး အကြီးအကျယ် ထောက်ပံ့နေကြတယ်။ တကယ့်ကချင်ပြည်တွေကိုတော့ သနားတယ်။
Myintnaing Htun said...
Should not be blame and yelling to the (Domestic and oversea) article writers cause they are writing from their site.This blog is notafighting area otherwise we should fight our common enemy and we need to study how to get freedom and pure democracy.
ဗမာ့တပ်မတော်က အားလုံးကို ဒို့တာဝန် အရေး သုံးပါး
ကို မဆန့်ကျင်လျင် မကန့်ကွက်ပါ ဟုယူဆပါသည်
ဗန်းမော်သည် သမိုင်းအစဉ် အဆက်အရ စစ်ကိုင်းတိုင်း
ထဲ ထည့်သင့် သည်ဟု လွတ်တော်၌ အဆိုတင်
Government Army and KIA are same. They are killing the innocent people.Even Two dogs are fighting, why we want our dog win. Let's change these mind. we are living in the same world. Stop fighting each other
ထားကြတာလဲ လူမျိုးကြီးဝါဒလား လူတိုင်း လူမျိုးတိုင်းမှာ ကိုယ့်တန်ဖိုးနဲ့ကိုပဲ။ သူများအိမ်မှာ မတရား ပါးရိုက်နားရိုက် အိမ်ထောင်ဦးစီးလုပ်ချင်လို့ကောင်းမလား။ ကိုယ့်အိမ်ကိုဆောင်ကြပေါ့ စစ်မှန်တဲ့ တန်းတူတဲ့ပြည်ထောင်စုကို တည်ဆောက်နိုင်ကြရင် ဘယ်လောက်ပျော်စရာကောင်းလိုက်မလဲ တကယ်ကိုချစ်စရာကောင်းတဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေပါ။ ကြီးနိုင်ငယ်ညှင်းမလုပ်ကောင်းဘူး။ ဒီလိုသာအချင်းချင်း သတ်ဖြတ်နေကြရင် ကြားက တရုတ် နဲ့ ကုလား ဒို့နိုင်ငံကို ယူသွားတာ သိလိုက်မှာ မဟုတ်ဘူးနော်။
တို့ဗမာတွေကို အင်္ဂလိပ်အနိုင်ကျင့်ခဲ့တုန်းက ဗမာတွေဘယ်လို ခံစားခဲ့ကြလဲ မဲ့သွားကြပြီလား နယ်ချဲ့ နယ်ချဲ့ တဲ့။ အခုတော့ လူနည်းစုတွေကို နိုင်ထက်စီးနင်းပြုနေပြန်ပြီ။ ဒီတော့ သိပ်မကြာတော့ဘူး ဒင်းတို့ တရုတ်တွေဆီမှာ ပြန်ခံစားရမယ်။ စောင့်သာကြည့်နေ။ ရာစုလား ထောင်စုလားဘဲ။